RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAJOELINA NO FOTOTRY NY FAHANTRANA – MyDago.com aime Madagascar
Tato ato hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy tiana dia marina ilay hoe izay alehan-dRajoelina dia maneno sahona avokoa. Raha tsy voatorabato dia voasiotsioka. Tsy mbola nisy ohatr’izany hoy izy teto amin’ny firenena. Ny antony dia ny soatoavina Malagasy no hitsakitsahan’ny fat.Tsy hiteny intsony ny tenako hoy Mamitiana mahakasika ny ray amandreny izay marary. Fandatsana ve ireny tany Atsimo ieny hoy izy fa resaka politika no atao. Na dia efa nilaza aza Rajoelina fa tsy hilatsaka dia ohatry ny manao fampielezan-kevitra sahady satria tsy mahatanty ilay hoe tsy eo amin’ny fitondrana ka manaonao foana ary tsy mahomby izay atao. Noho izany hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity dia tokony hahatsapa Rajoelina fa tsy tokony ho eo amin’ny fitondrana intsony. Raha izao no mitohy hoy izy dia Rajoelina no fototry ny fahantrana. Noho iznay hoy Mamy Tiana dia miantso ny vahoaka Malagasy ho tonga saina. Raha sehatra lehibe toy ireny aza hoy izy ianao voasiotsioka ka vao amaika zavatra hafa. Ho antsika mpanao politika dia tokony ho kajiana ny zavatra atao. Momba ny hetsikin’ny zanak’i Dada dia nambarany fa mihetsiketsika hatrany isika ary mahomby izany. Ny zanak’i Dada hoy izy rehefa manao zavatra dia manao amin’ny fony.Ilaina ny firaisnakinantsika araka ny tenin’i Dada fa kely sisa dia hotonga izy.
RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA
RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY ILAINA INTSONY SIMAO FA TSY MAHAVAHA OLANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 mars 2013 11 mars 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAJOELINA NO FOTOTRY NY FAHANTRANA”
Efa hoe: sarin-diky no miteny fa tsy ( TENIN-DEHILAHY)
ka inona no mahagaga??Mba ahamamy hoditra azy tany atsimo tany
fa mafy loatra ny FAHORIANA nampitondrainy ny olona tany dia ….ohatra ilay FD hany io e!
efa vita ny nilany azy dia HIFIRANY ny sisa, fa tsy izany koa o hanova inona an!!vao maika
ny alika misisika mitady taolana any aminy fa tsy ampy izao efa FANIRATSIRANA ataony ny
VAHOAKA izao fa tsy mainsy LELAFINA sao tsy mahazo ilay taolam-pifika kely ny sasany.
tsy maintsy narahina ihany izany ny sitrapon-drajoelina fa matahotra azy isika mianakavy,
eny e! ho fitsinjovana an´i bebe razay angah dia nilefitra .
Fa tsy azo atao ity manaraka izay tian´i rajoleina mpnaongam-panjakana ity,
Dia mbola ho toy izay koa izany ny fodina´i DADa , rehefa tsy eken-DRajoelina dia tsy mahazo mody i DADA.
Tena I Rajoleina marina izany ny mpnajkan´ny Malagasy,tsy refesi-mandidy, fa izy no tompin´ny teny frany. ka miomana izay filoha ho lany oe fa toa ho ataony rajoleina sy frantsay saribakoly ihany koa, I omere beriziky aza moa tsy nahatohitra fa nihanalefka ary nalazo ny farany .
Maty ianao ry tanindrazako mahonena !!!!
FOZA MATOTRA dit :
MIARAHABA AN’I RAMATOA LALAO RAVALOMANANA, HO LANY HO FILOHA ANIE IANAO
ANDRY M'LAY dit :
i dada koa dia tsy maintsy miditra mangingina fa raha tsy izany dia ho hita eo ny tohiny
Précédent Article précédent : Maloka ila ny Ankolafy…
Suivant Article suivant : Sary Magro 11 Mars 13